ဥရောပမှာတော့ကြိုးစားပါရန်အများစုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ဒေသခံစားနပ်ရိက္ခာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့ကြိုးစားပါရန်အများစုမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ဒေသခံစားနပ်ရိက္ခာ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 24/02/2020)
အခါဥရောပအဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုမတူညီအဖြစ်တိုက်ကြီးမှကြွလာ, သင် gastronomic အစဉ်အလာပဲအမြိုးမြိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏အလောင်းအစားနိုင်ပါတယ်! သငျသညျအမြိုးမြိုးသင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဆင်းစိန်ခေါ်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော (ကျနော်တို့ euphemistically ကဒီမှာကြောင်းနာမဝိသေသနအသုံးပြုနေသည်) အခ, ထို့နောက်အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ဒေသခံဥရောပမှာကြိုးစားရန်အစားအစာကိုအဘယ်မှာရှာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းမှာကြည့် – သငျသညျစပ်စုသို့မဟုတ်သတ္တိခံစားနေလျှင်ဖြစ်ကောင်းသို့တူး.
အသွေးတော်နှင့်ဖန်ဆင်းအစားအစာများ၏အယူအဆကျွန်တော်တို့ကိုခကျြခငျြး Haggis ၏စကော့တလန်ရိုးရာမုန့်ညက်ထင်စေသည်. တစ်ဦးက savory pudding သိုးရဲ့ဆွတ်ပါဝင်သည် (နှလုံး, အသည်း, နှင့်အဆုတ်); minced ကြက်သွန်နီနှင့်, oatmeal, suet, နံ့သာမျိုး, နှင့်ဆား, စတော့ရှယ်ယာနှင့်အတူရောနှော, နှင့်အစဉ်အလာတိရစ္ဆာန်ရဲ့အစာအိမ်ထဲမှာဖုံးလွှမ်းနေစဉ်ချက်ပြုတ်. ဒါကြောင့်, အသွေးတော်ဟင်းချို၏အယူအဆမှထူးခြားသောမဟုတ်ပါဘူး ဂျာမနီ, ဒါပေမယ့် Schwarzsauer, ယင်း၏ savory အရသာနှင့်အတူ, ဖြစ်.
ဝက်၏အသွေးကိုစာရေးတံနှင့်ဖွဲ့ (သို့မဟုတ်အနက်ရောင် pudding), ငန်း giblets, နှင့်ရှာလကာရည်, အဖြစ်သစ်ကြံပိုး, လေးညှင်းပွင့, peppercorns, နှင့်အခြားနံ့သာမျိုး, မြောက်ပိုင်းဂျာမဏီကနေဒီအထူးသက်သတ်လွတ်အိပ်မက်ဆိုး၏ပစ္စည်းပစ္စယဖြစ်ပါသည်.
ကောင်းမွန်သောသတင်း Schwarzsauer တစ်ဦးချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာပန်းကန်နေ့ကို၏ကျန်အဘို့သင့်ပရိုတိန်းလိုအပ်ချက်ဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါသတင်းဆိုးသောခိုင်ခံ့သောအရသာဖြစ်ပါသည် (နှင့်အနံ့) လူတိုင်းဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အရာတစ်ခုခုမဖြစ်.
ဒါဟာသင်ဒေသခံအစားအစာစျေးကွက်သို့မဟုတ်ရိုးရာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တစ်ပန်းကန်ဖြစ်ပါသည် စားသောက်ဆိုင်. ဤတွင်ကျနော်တို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်တွေ့ရှိခဲ့တဦးတည်းကဖီးရဲ့, ကဖီးက Black Sauer ဒါကြောင့်ထုတ်စစ်ဆေး!
F ကိုထို့အပြင်္တရအဖြစ်လူသိများ ilmjolk, ဆွီဒင်ကနေအစဉ်အလာကစော်ဖောက်ခြင်းနို့ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်, နှင့်နော်ဒစ်နိုင်ငံများအတွင်းဘုံနို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်. ဒါဟာမျိုးစိတ် Lactococcus lactis နှင့် Leuconostoc mesenteroides ကနေဘက်တီးရီးယားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူနွားမရဲ့နို့ fermenting အားဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည်. အဆိုပါဘက်တီးရီးယား Lactose ကို metabolize, သကြားသဘာဝကျကျနို့၌တွေ့, Lactose ကိုသည်းမခံသောနေသောလူမျိုးပိုကောင်းသည်အခြားနို့ထွက်ပစ္စည်းများထက်ကသည်းခံနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကလက်တစ်အက်ဆစ်သို့. အဆိုပါအက်ဆစ်တစ်ဦးအချဉ်အရသာ filmjolk ပေးသည်နှင့်နို့ရည်ပရိုတိန်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်, အဓိကအားဖြင့် casein, coagulate မှ, အရှင်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်စေးပျစ်. အဆိုပါဘက်တီးရီးယား diacetyl ၏ကန့်သတ်ငွေပမာဏလည်းထုတ်လုပ်ရန်, တစ်ဦး buttery အရသာနှင့်အတူတစ်ဦးဝင်း, ယင်း၏ဝိသေသအရသာ filmjolk ပေးသော.
ကျနော်တို့လုံးဝဒီအပေါ်ကိုရောင်းမရင့်, သင်မူကားဥရောပတိုက်တွင်ကြိုးစားရန်ဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ဒေသခံအစားအစာတောင်း, အဆိုပါ tastiest မဟုတ် 😆
ဥရောပတိုက်တွင်ကြိုးစားရန်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဒေသခံအစားအစာ: သိုးထိန်းသည် Hove
သင်တစ်ဦးစကင်ဒီနေးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ ခရစ္စမတ်, scrumptious သစ်ကြံပိုး cookies နဲ့ gravdlax စိတ်ထဲပေါက်စေခြင်းငှါ,. သင်သည်အဘယ်သို့စဉ်းစားမရစေခြင်းငှါ, smalahove ဖြစ်ပါသည်. (ကိုယ်ကိုကိုယ်ခါးကိုစီး) ခရစ္စမတ်ညစာစားပွဲ၌ရာအရပျ၏မာနထောင်လွှားကြာသောမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ပြုတ်သောသိုးသငယ်၏ဦးခေါင်းကို. အာလူးဖြင့်လိုက်ပါသွား, ဆီဥနှင့် mash ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများ. ဒီပန်းကန်ကြိုးစားကြဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းဖြစ်ပါတယ်သောသူမည်သည်ကား,, မျက်စိကို - ပထမဦးဆုံး fattiest-bits အပေါ်နှိမ့်ချ chowing ၏အပျြောအပါးရှိပါတယ်, နားရွက်, နှင့်သောလျှာသည်ကပါဝင်သည်ရဲ့လျှင် - တစ်ဇွန်းနှင့်အတူဦးခေါင်း၏ကျန်ထွက် scooping မတိုင်မီ. ဒါဟာရဲ့ - ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာခရစ္စမတ်!
ရဲ့တစ်ဦး tastier မှတ်စုပေါ်မှာဤချွတ်အဆုံးသတ်ကြစို့, ကြှနျုပျတို့လုပျပေးရမညျလား? လူအများစုဟာဒိထောပတ် cookies များကိုအကြောင်းကိုငါသိ၏ (smakager), နှင့် liquorice (licorice), ဒါပေမယ့်အဘယျသို့ကအခြားအစားအစာများနှင့်၎င်း၏ Goodies အကြောင်းကို?
Herring အလွန်ရေပန်းစားသည်ဒိန်းမတ်ဖြစ်ပါသည်! ဒါဟာမီးခိုးရောင်း, ဟင်း, Marine, သို့မဟုတ် Sol ကျော် Gudhjem အဖြစ်. ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်ဒိန်းမတ် Bornholm ကျွန်းတွင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်. 'Gudhjem အထက်နေ'. '' Gudhjem ကျော်နေရောင် '' အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသော – Bornholm အပေါ်တစ်ဦးမြို့. ကောက်မုန့်တ buttered အပိုင်းအစ Is. herring နှင့်အတူထိပ်ဆုံး, အနီရောင်ကြက်သွန်နီ, နှင့်ကြက်ဥအနှစ်. ဆော်လမွန်ငါးကဲ့သို့သောအခြားငါးများ, plaice, နှင့်ကော့ထိုကဲ့သို့သော parsley ငံပြာရည်နှင့်အာလူးအဖြစ် dressings သည်နှင့်အတူစားရကြသည်.
သင်၏နှုတ်ဥရောပမှာကြိုးစားရန်ဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ဒေသခံစားစရာဘို့ရေလောင်းနေသည်? သင်၏နောက်စွန့်စားမှုများ၏အကူအညီဖြင့်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန် တစ်ဦးကရထား Save !
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Finteresting-local-food-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ဒေသတွင်းအစားအစာ europetravel အစားသောင်းကြမ်းသူ trainjourney ရထားခရီးသွား